Soo saaraha xalka nalalka - Shanghai P&Q lamp Co., Ltd.
Alaabada caadiga ah ee P&Q
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. oo la aasaasay 2005 waa shirkad soosaara laydh xirfadlayaal u leh dhinashada-cirbadaha, cirbadda caagga ah, iyo birta xaashida ah. Waxay ka kobcisaa mid yar mid weyn oo leh dhinaceeda dhidibbada iyo warshad isku dhafan oo ku taal Haining tallaabo tallaabo. Mashiinka shubka dhinta ee 200 tan ~ 800ton. Waxaan si isdaba joog ah u maalgashannaa qalabka cusub si aan si guul leh ula kulanno caqabadda horumar joogto ah, mar walbana waxaan siino xalka ugu habboon ee baahi kasta oo macaamiisheena ah. P&Q ma laha cirbadeyn caag ah iyo warshad bir ah, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa cirbadeyn balaastig ah iyo qaybo bir bir ah sida waafaqsan macaamiisha looga baahan yahay.
Warshad ay leedahay shirkadda P&Q oo ku taal Haining, Zhejiang, China. Wax aan ka yarayn 6000 m2.Soosaarka wuxuu ku shaqeynayay maaraynta tayada ISO9001. Oo xafiiska iyo warshadu waxay ku maareeyeen nidaamka ERP ilaa iyo 2019.
At P&Q, waxaan fahamsanahay in tayo sare leh, qalab qalabaysan oo sifiican loo qaabeeyay ay soo saaraan alaab tayo sare leh, adeegsi wax ku ool ah iyo nolol qalab dheer Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka dayactirka qalabka P & Q ee firfircoon wuxuu hubiyaa waxqabadka ugu wanaagsan, kalsoonida iyo cimri dhererka. Markii ay com ...
Daraasadaha kiisaska P&Q
Xalka P&Q ● Kudar 4pcs 3mm feeraha xoojinaya xaga sare (Maya # 1,2), 6pcs 2.5x3mm feeraha xoojinaya iyo 2pcs giraanyada xoojinaya salka ...